आज २०७७ असोज २१, गते बुधबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
कात्तिक ७, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ४९९ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा १६ हजार ८६३ नमुना परीक्षण गर्दा १६९० महिला र २८०९ पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससँगै कुल संक्रमितको संख्या १ लाख ५३ हजार ८ पुगेको छ । उनीहरुमध्ये ८२९ जनाको मृत्यु भएको […]
४ घण्टामा थप ९ को मृत्यु, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (तथ्यांकसहित)
प्रदेश ५: यसरी कायम भयो भालुवाङ राजधानी, यस्तो छ भित्रि कुरा